नारीभित्र छताछुल्ल रहेको भावनाको कथाः रेप नम्बर ............... (भाग २) - egaurishankar.com – gaurishankar himal, dolkha khabar, dolakha news garushankar news, Political News, Science, Social, Sport, Ecomony, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video
नारीभित्र छताछुल्ल रहेको भावनाको कथाः रेप नम्बर ……….(भाग २)
नवराज शिवाकोटी, अनाम
अघिल्लो अङ्क (भाग १) बाट क्रमशः
कोठामा सबै बसेका छन् । म पुगेपछि सबै मेरो मुखमा हेर्न लागे । नारी स्वभावको कारणले होला म केही लजाएँ । मेरो यो लजाई लाई के ठान्यो कुन्नी काकाले लिएर आएको एक पात्र पनि केही लजायो । मैंले सोचें मेरा लागि ल्याएको मान्छे यही हुनु पर्छ ।
केही क्षणको निस्तब्धतापछि काकाले आफ्नो सालाको बखान झिके । विदेश गएर आएको, टन्न पैशा कमाएको शहरमा घर भएको आदि आदि । मलाई भने मेरो विदेश गएको साथीको मात्र सम्झना आइ रहेको थियो । बयान गरेर थाके छन् क्यारे मेरा काका । त्यस पछि उनले भने, “ छोरी तिम्रो विचार के छ ? ”
मैले दुई वर्ष अब विहे गर्दीन पढाइ नसकी भनें । काकाले क्रोधित अनुहार लगाए । आफूलाई जन्म दिने आमाको अनुहार हेरे उनको अनुहारमा पनि क्रोध मिश्रीत पिडा थियो । बाजे बज्यै पनि नमिठो अनुहार लगाई रहेका थिए । रोगी मेरा बाबु पनि मलाई क्रोधित भएर हेर्दै थिए । मलाई पनि रिसउठ्यो तर केही बोलिन । निक्कै बेरको सन्नाटा पछि हजूरबाले भने,
“नानी तेरै भविष्यकोलागि हो । उमेर गएपछि केटा पाइन्न राम्रोसँग सोच नत्र पछुताउलीस ।”
हजूरबाका आँखामा हेरें आँखामा पानी मरिसकेका मेरा हजूर बा को पनि चाहना त्यही केटासँग विहे गरोस भन्ने थियो । आँखिरमा सोचौंला भन्दै म त्यो जमातबाट बाहिरिएँ । उनीहरु निक्केै बेर कुरा गरी रहे । म कोठामा गएर रुँदै उस्लाई फोन गर्न लागें । ऊ पनि फोनमानैं रुन लाग्यो । बल्ल बल्ल स्कलरसिप मिलाएर विदेश गएको ऊ पनि फर्कन सक्ने अवस्था थिएन ।
म उसलाई फोन गरेपछि निक्कैे बेर रोएँ । भोलि विहान मलाई फेरि कचकच हुने छ । यो भन्दा बरु यो रातनै कहिल्यै नसकिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्यो । तर मैले भन्दैमा के रात नसकिएला त ?
भोली पल्ट विहानअवेर सम्म निदाएछु । आमाले विहान चिया खान झक्कझकाउँदा पो विउँझिएँ । मैंले चिया खाँदै गर्दा आमाले खाना बनाइसक्नु भएछ । म तल्लो तलामा आउँदा त उनीहरु खाना खान लागेका थिएँ । खाना खाइ सकेपछि उनीहरु जानलागे । जाने बेलामा काकाले केही रिस मिसिएको आवाजमा भने,
“छोरी राम्रोसँग सोच है । हामी अब एक महिना पछि आउँछौं मंशिरमा विहे गर्नु पर्छ ।” म केही बोलिन ।
उनीहरु गएपछि मलाई लाग्यो अब भने म बधिकहरुको हातबाट बाचेँ । तर नियतिलाई कहाँ मञ्जुर थियो र ? अब घरको शान्ति भंग भयो । जतिखेर पनि घरका मानिसहरु मलाई त्यही पात्रसँग विहे गर्न कर गर्नलागे । म अश्विकार गर्दै गएँ । यो क्रम निक्कै दिनसम्म नरोकिए पछि सबै मलाई धम्किदिनलागे । म सहनैं नसक्ने अवस्थामा पुगें । म के गरौं ? कहाँ जाउँ ? मेरो मान्छे त विदेशमा छ । मेरो कुरा सुन्न र भावन बुझ्न परिवारका मानिस तयारनैं छैनन् । म निरास भएँ । काका फोनबाट धम्क्याउँदै छन् । उनी आउने दिन नजिकिन लाग्यो । मेरो भनेको मानिस पनि कुनै हालतमा पढाइ नसकि नआउने भयो । आवस पनि कसरी । म उसलाई पनि दोष दिन्न ।
म जीवन देखिनैं निरास हुन लागें । खाने बस्ने सुत्ने उठ्ने मेरा दिन चर्यामा परिवर्तन आउन लाग्यो । अब त आमा बाबु पनि मलाई शत्रु जस्तै लाग्न लाग्यो । उनीहरु आफूले जन्माएको अधिकार स्वरुप यो शरीर कसैलाई भोग गर्न दिन उद्धत थिए ।
एक रात खाना खाएपछि सबै निदाए । जुन लागेको थियो । म एक्लै बाहिर निष्कें । जड्याहाको विगविगी छ । तै पनि मलाई डर लागेन । म मुल बाटोमा निष्के । किन निष्के थाह छैन । एक पटक झसंग भएँ । कतै कुनै जड्याहाले केही गर्यो भने…..? फेरि तत्क्षण लाग्यो आँखिर मैले जीवनम अनिच्छित मान्छेकी स्वास्नी बनेर बाँच्नु पर्ने नैं भयो । अब एकछिन कुनै जँड्याहाले अंगालोमा बाँध्यो भने पनि के होला र ? म सरासर आगाडि बढें खोला तर्फ । बाटोमा कोही भेटीएन । रातको १२ बजेछ । तर किन आज डर पटक्कै लाग्दैन ।
खोलाको कल कल बग्ने पानीलाई हेरें । अविरल बगिरहेछ । पानी छोएँ चिसो छ । हेरें मानिसको जीवन र यो पानीमा कति समानता छ । पानि कहिले झरना कहिले खोला अनि कहिले नदी र कहिले समुद्र । कहिले सफा अनि कहिले लेदो । उ सँगको सामिप्यता हुँदा मेरो जीवन मलाई संलो पानी जस्तो लाग्थ्यो । लाग्छ अब मेरो जीवन पनि धमिलो बन्दै छ । मेरो जीवन ढलजस्तै बन्दा मेरा परिवारका सदस्य खुशी हुने छन् ।
निक्कै बेर पछि म फर्कनलागें मेरा बाबुको घर तफर्, जुन घरमा म जन्मिएँ हुर्किएँ, माया पाएँ अहिले त्यहीँबाट फालिन लागि रहेको छु । बाटो नजिक जंगल थियो । अचानाक एक आकृति देखियो । म चिच्याएँ । त्यो आकृति पनि केही हच्कियो र लरबरीएको स्वरमा भन्यो किन कराएकी म पनि तमान्छे नैं हो । अलिकति पिएको त हो नि । स्वर चिने चिने जस्तो लाग्यो तर ठम्याउन सकिन । मलाई के गरौं गरौं लाग्यो तर जे त होलाभन्दै अगाडि बढें । लाग्यो त्यो आकृति मलाई पर्खेर बसेको थियो ।
जब म त्यसको नजिक पुगें उसले मेरो हात च्याप्प समात्यो । म भस्किएँ । उस्ले सोध्यो किन अघि चिच्याएको ? मैंले जवाफ दिइन हात छुटाउन बल गर्नलागें । उस्ले छोडेन । मैले चिनेकै मानिस रहेछ । आँखिरमा मैंले उस्को हात नराम्रोसँग टोकिदिए । उस्ले छोड्यो म दौडिएँ । उस्ले लखेट्न लाग्यो तर भेट्न सकेन । म दौडदै घर पुगें । स्वास बढेर आयो । कसो नसिध्याएको ? म झण्डैं बलत्कृत भएँ । भक्कानिएर रुन मन लाग्यो तर रुन पनि सकिन । किन कि यसले त मलाई एकै छिन सास्ति दियो तर मलाई जीवनभर सास्ति दिने तयारी हुँदैछ । यसले यति गर्न खोज्दैमा मैले रुन ठिक होला र ? बलात्कारै गरेको भए पनि उस्ले त एकै छिन कष्ट दिने न थियो तर यहाँ त बाँचुञ्जेल मलाई बलात्कार गराइरहन मेरा परिवार नैं लागेका छन् ।
अब काका आउन एक दिन मात्र बाँकिछ । बेलुका फोन गरेर भने,
“ हेर छोरी मैले भनेको केटासँग विहे गरिनस भने तेरो र मेरो कुनै सम्बन्ध रहने छैन । अरुसँग विहे गरिस भने म तँलाई पनि बाँकी राख्दिन र तेरो त्यो केटालाई पनि जिउँदो राख्दिन ।”
कति सजिलै भनेका मेरा काकाले । जीवन त मैंले भोग्ने हो नि । मेरो जीवनको कसरी उपयोग गर्ने के मलाई अधिकार छैन ? अन्तिम पटक उसलाई फोन गरें ऊ बोल्न सकेन । मैंले पनि के के भनें हेक्का रहेन । मैंले ठानें ऊ सँगको सम्बन्धको अब अन्त्य हुँदै छ ।
भोली पल्ट बेलुका काका आइपुगे । उनीसँग थियो मलाई बलात्कार गराउनकोलागि ठिक पारिएको पात्र । मलाई अब थाह भयो कि अब म केही गर्न सक्दिन । लाग्यो म अब कोमामा पुगेको विरामी जस्तै बनेको छु । अस्तित्व विहिन जीउँदो लाश । बेलुका परिवारका सबै सदस्य मिलेर मलाई फेरि केटा मन प¥यो हैन भनेर सोधे । म केही बोलिन । साह्रै कर गरेपछि मैंले रुँदै भने जे मनलाग्छ त्यही गर्नुं भनें । मलाई लाग्यो मेरा बाबु आमा तथा मेरा परिवार मेरो विवाह गर्न होइन मलाई कुनै पुरुषलाई जवरजस्ती बलात्कार गर्ने अनुमति दिँदै छन् । बाबु आमा देख्दा पनि घृणा लाग्न लाग्यो । आफूूले जन्माएको छोरीलाई विहेको नाममा कुनै पुरुषलाई निर्वाध रुपमा बलात्कार गर्ने अनुमति दिनलागेकोमा ।
विहेको दिन समेत उनीहरुले निधो गरिसके छन् । विहे गर्ने भनेको केटाले भोली पल्ट मलाई गहना लुगा के के चाहिन्छ भनेर सोध्दै थियो । मैले केही चाहिन्न भनें उस्ले अलि नमिठो मुख लगायो ।
विहेको दिन नजिकिन लाग्यो मैले सबैसँग बोल्न छाडे । आमा कहिले काहीँ रुँदै सम्झाउनु हुन्थ्यो । म केही जवाफ दिन्नथें । मलाई आफ्नै जन्म दिने आमा प्रति पनि अथाह घृणा लाग्न लाग्यो । मैंले मनमनैं प्रतिज्ञा गरें विहे भएपछि म पूनः यस घरमा फर्किएर आउने छैन ।
विहेको दिन आयो सबै दंग थिए, धनि ज्वाइँ पाएकोमा । मलाई भने दुलहाको अनुहार हेर्न मन थिएन । ऊ घरी घरी मलाई पुलुक्क हेथ्र्यो । मलाई लाग्थ्यो ऊ मलाई असाध्यै मन पराउँछ । तर उसले मात्र मन पराएर के गर्नु । मैंले उसलाई मन पराउन सक्ने अवस्था थिएन । विहे सकियो मलाई आमा बाबुले अन्माएर पठाउन लागे उनीहर आँखाबाट आँशु झार्दै थिए । तर मेरो आँखाबाट भने एक थोपा आँशु पनि खसिरहेको थिएन । सायद म अब जड मुर्ति बनिसकेकी थिएँ । आँशुहरु सबै सुकि सकेका थिए । केवल मनमा आमाबाबु अनि काका प्रति तिब्र घृणा मात्र थियो । म केही बोलिन । काका पनि अँध्यारो मुख लगाउँदै थिए । तर मलाई लाग्यो छोरीलाई बलात्कार गराउन सकेकोमा उनी मख्ख छन् । बलत्कारिका मतियारहरु !
विहे माइतिघरबाट अन्मियो । बाजा पनि बजाइँदै थियो । म बलत्कृत हुन लागेकोमा खुशी मनाइरहेका थिए सबै जना । मलाई बाटो भरी यस्तै लागि रह्यो । म बलत्कृत बन्न लागेको खुशीयालीमा दुलहाको घरमा निक्कै ठूलो भोजको आयोजना गरिएको रहेछ ।
म मेरो भनिएको घरमा भित्रिएको दिन देखि बलत्कृत हुन सुरु गरें । जो मेरो श्रीमान हो, ऊ मलाई माया पनि गर्छ । म पनि माया गरेको अभिनय गर्छु तर मेरो मनले उस्लाई आज यति धेरै वर्ष वित्दा पनि श्रीमान स्वीकार गर्न सकेको छैन र जीवन भर गर्ने पनि छैन । मैले आफूलाइँ सँधै यौन दाशी मानिरहेको छु । विहेपछि म कहिल्यै माइत गइन । श्रीमानले निक्कै कर गर्दा पनि म जाँदै गइन । काका उनको सालाको घर भएकोले एक दुई पटक आए तर म बोलिन । त्यसपछि उनी पनि आउन छाडे । उसलाई पनि सायद अचम्म लाग्यो होला मेरो यस्तो ब्यावहार ले । तर जे सोचोस उस्ले, मेरा बाबु आमा मर्दा समेत पनि म माइत गइन । गाउँले र घरतिरकाले पनि मेरो निक्कै कुरा काटे रे !
छोरो जन्मियो मलाई खुशी लागेन बलात्कारको चिन्ह जस्तै लाग्यो । तर मानवीय नाताले उप्रतिको कर्तब्य निभाइ रहें । उसको विहे गर्ने बेलामा भने म अली सतर्क भएँ । केट केटी दुववैको इच्छा खुलस्त बताउन लगाएर दुवै सन्तुष्ट भएको बुझेपछि मात्र विहे गराइ दिएँ । लाग्यो एक छोरी मान्छेलाई बलत्कृत हुनबाट बचाएँ ।
अहिले जब बलात्कारको समाचार सुन्छु अनि मन एक तमासको भएर आउँछ । लाग्छ कम्तिमा यसको त चर्चा सम्म हुन्छ । कानुनले पनि थोर बहुत सजाय दिन्छ । तर म अनि म जस्ता नारी जाति जो जीवन भर बलत्कृत भएर बस्न बाध्य छन्
यसको चर्चा कहिँ हुदैन । भोग्नैं पर्दछ बलात्कारका अनन्त श्रृंखला जीवन रहेसम्म।